Ma San Lei Lei Seinn
GARNIER SUPER ESSENCE 30ml. 12000ks လက်လီလက်ကားဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်နော် မှာယူလိုပါက 0943187782😘
😍အမလားလိမ်းပြီးကတည်းက မလှမှာမပူတော့ဘူးနော်😘😘🙂 New Skiin ကို သုံးဖူးပြီလား စမ်းသုံးကြည့်ပါ လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့် အရမ်းကောင်းတဲ့ New Skin လေးမှာ Snail mucus အပြည့်ဝဆုံးအဟာရနှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပါတယ် Vita Collagen အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာပျောက်ကင်းစေပါပြီးအသားအရေကိုတင်းရင်းစေပါတယ် Protein and Vitamin အရေပြားအသစ်ထွက်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီးအိုမင်းပျက်စီးနေတဲ့အရေပြားဆဲလ် များကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ် Antioxidants အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက် အမည်းစက် မ်ား ဝက်ခြံအမာရွတ် များကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ် မြန်မာ ကိုရီးယား ဗီယက်နမ် (3)နိုင်ငံFDA ရပြီးသား ပစ္စည်းမို့ စိတ်ချစွာလိမ်းလို့ရပြီနော် 5g-3500ks 50g-29500ks 😘Order to Cb😘 09-454549089 m.me/NewSkiinMyamar
တစ်လအတွင်း သင့်အသားအရေ သိသာစွာ ‌ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုရင် သင်ယုံမလား . . . အောက်ပါ အဆင့်လေး‌တွေကိုသာ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်ပါ ၁. 💎New Skiin Supplement💎 ကို တစ်ရက်တစ်လုံး ပုံမှန်သောက်မယ်. ၂. 💎New Skiin Mask💎 ကို တစ်ပတ် ၂ ရက် ပုံမှန်ကပ်မယ်. ၃. 💎New Skiin Cream💎 ကို ‌နေ့တိုင်းပုံမှန်လိမ်းမယ်. တစ်လပဲ အချိန်ပေးပါ. သင့်အသားအရေ သိသာစွာ ‌ကောင်းမွန်လာဖို့ အာမခံပါတယ်. မယုံရင် Before After ပုံလေး ရိုက်ပြီးယှဉ်ကြည့်နော် . . . New Skiin 💎💎💎Supplement အလုံး ၃၀ ပါ တစ်ဘူး ၂၉၅၀၀ ကျပ် 💎💎💎Mask ၅ ချပ်ပါ တစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ် 💎💎💎Cream 5g ပါ တစ်ထုပ် ၃၅၀၀ ကျပ် Focus Beauty ရဲ့ တရား၀င် Agent Card ရထားသူများထံမှာ ၀ယ်ယူမှ စိတ်ချရမယ်နော်. #NewSkiin 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
😍မောနင်းပါ😘 စျေးကွက်ထဲ ရောင်းအားကောင်းနေတဲ့ Products ကို ရောင်းဖို့ တွေဝေနေရင် သေချာတယ် ကျန်ခဲ့တော့😔 စိတ်ဝင်စားရင်တော့👉cb အမြန်လာနော် m.me/NewSkiinMyamar 09454549089
😘 ဒီလိုတွေ အသားမပက်ရအောင် New skiin နဲ့ နေ့တိုင်းညတိုင်း မျက်နှာလိမ်းပါနော် အသားပက်တယ်ဆိုတာ ဂျို နဲ့လား မေးရပါလိမ့်မယ် ချစ်လို့ ပြောပြတာ ❤️ Crd New Skin ဆိုတာ ဘယ်လိုလိမ်းရလဲမေးတဲ့ချစ်တို့အတွက် Price ~ 3500 ks 09454549089
Snail Wish Whitening Cream ♥️ ပစ္စည်းလေးစစ်မှန်ကြောင်းတော့အရင်အာမခံတယ်နော်💯 Korea brand လေးစစ်မစစ် codeလေးကို တချက်ရှိုး အသက်ရွယ်မရွေးသုံံးလို့ရတယ် လိမ်းလို့ရတယ် ကလေးကနေလူကြီးထိလိမ်းလို့ရ 👍 ကျား မ မရွေးလည်းလိမ်းလို့ရတော့ဘာကျန်သေးလဲနော် ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်သလဲဆိုတာ တစ်ဘူးဝယ်ပီးတစ်အိမ်သားလုံးလိမ်းလို့ရတယ်နော် သိပ်အဆင်ပြေ 🥰✌️ စမ်းသပ်ကြည့်အုံးမယ်ဆိုပြီး တထုတ်သုံးကြည့်တယ် စစချင်းရက်မှာတင် woww😲အရမ်းကိုနူးညံ့လာတဲ့မျက်နှာလေးကို အိမ်ယာနိုး မှန်ကြည့်မိတဲ့အချိန် အကျေနပ်ဆုံးပဲ ခုတော့ရဲရဲမိတ်ဆက်ပြီ သူငယ်ချင်းလေးတို့ရေ♥️♥️ ကိုရီးယားနိူင်ငံ Rebond စက်ရုံကထုတ်ပြီး Focus beauty ကတင်သွင်းတဲ့ခရုအချွဲအကျိနဲ့ပန်းပေါင်းစုံရောစပ်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ 🌹 New Skiin🌹 လေးပါ New Skiin ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ့်ကို new skin ပဲနော် ✨ ~အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေပြီးအစို ဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် ~အသားအရေ တင်းရင်းပြီးအရေးအကြောင်းတွေပျောက်စေတယ် ~တင်းတိတ်၊မှဲ့ခြောက်နှင့်ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ် ~ကပ်စေးခြင်းမရှိတဲ့အပြင် Sensitive ဖြစ်တဲ့အရေပြားအမျိုးအစားလည်း သုံးနိူင်ပါတယ် အရေးအကြီးဆုံးအချက်🏵️ အသားအရေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ Paraben, mineral oil, bezophenone, alcohol, phenoxyethanol, synthetic perfume များ (လုံးဝလုံးဝ) မပါဝင်ပါ အသုံးပြုပုံ💮 မနက်တကြိမ် ၊ ညတကြိမ် မျက်နှာသစ်ပြီး လိမ်းပါ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းမီ primer အနေနဲ့သုံးရင်လည်း မိတ်ကပ်ကြောင့်အသားအရေပျက်စီး မှုကို ကာကွယ်ပေးနိူင်ပါတယ် Snail wish50g= 29500 စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ New Skiin 5g= 3500 ကိုယ်ကတော့ အထုတ်ကလေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာပါကွယ် ဝယ်လိမ်းလို့ ကိုရီးယားမလေးတွေလို့ မျက်နှာလေး ဖြူဝင်းတင်းတင်းပြောင်ပြောင်လေး မဖြစ်ရင် ကြိုက်သလိုပြောကွယ်💗 လိုချင်ရင် 📞 09454549089 ခုပဲဆက်လိုက်တော့နော် မြန်မာပြည်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်
Sheet Mask ‌တွေကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ ကပ်ကြမလဲ . . . အစိုဓါတ် ဖြည့်တင်း‌ပေးတဲ့ Sheet Mask ‌တွေ ဥပမာ New Skiin Mask ကိုတော့ Daily ကပ်ပေးလို့ ရပါတယ်. ချေးချွတ်တဲ့ Mask ‌တွေ ဥပမာ AHA, BHA ပါတဲ့ Mask ‌တွေကိုတော့ တစ်ပတ် ၂ ကြိမ်ထက် ပိုမကပ်သင့်ပါဘူး. မနက်ညဆိုတဲ့နေရာမှာ New Skiin Mask ကိုတော့ မနက်ရော ညပိုင်း‌ရော ကပ်လို့ရပါတယ်. မနက်ကပ်ပေးရင် Glow Glass Look ကိုရစေပြီး ညကပ်ပေးရင် တစ်ညလုံး အရေပြားကို ‌ရေဓါတ်ဖြည့်တင်း‌ပေးပါတယ်. မဂ်လာဆောင်၊ ဘွဲ့ယူ စတဲ့ ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ရက်တွေမှာ အသားအရေ အလှဆုံးဖြစ်ချင်ရင်တော့ New Skiin Mask ကို တစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီး ‌‌နေ့တိုင်းကပ်ပေးပါ. New Skiin Mask က ‌ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ Mask ဖြစ်လို့ ‌‌နေ့တိုင်းကပ်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါဘူး. အရေပြားရဲ့ Skin Barrier ကိုပိုမို ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်လာ‌စေပါတယ်. New Skiin Mask ၅ ချပ်ပါတစ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ကျပ်. #NewSkiinMask #TheBestFaceMask 09454549089
အသားကို ချက်ချင်းဖြူ၀င်းစေတယ်ဆိုလို့ အသားအရေထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်ြသားလား စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ အသားအရေကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ Mercury တွေ Steriod တွေလုံး၀မပါ၀င်ပါဘူး။ အသားအရောင်ကို Coverage နဲ့ဖြူ၀င်းစေတာဖြစ်လို့ ချွတ်ဆေးတွေ ပါမှာလည်း မကြောက်ပါနဲ့နော်။ Coverage ကလည်း ရေစိုခံလုပ်ထားပေးလို့ ရေစိုမှာလည်း ကြောက်စရာမလိုဘူးနော်။ သင်္ကြန်အတွက်ဆိုရင်တော့ ကွက်တိပဲပေါ့။ Cream အရောင်လေးကိုက ဖြူစင်၀င်းအိပြီး ဘာ Chemical ရဲ့ အရောင်အဆင်း အနံ့အသက်မရှိတာ လက်တွေ့သုံးဖူးသူတွေ အသိပါ။ ဒါ့အပြင် အေရျပားကို ထိခိုက်စေတဲ့ Paraben, Mineral Oil, Benzophenone, Alcohol, Phenoxyethanol, Synthetic Perfume မ်ား လုံး၀မပါ၀င်ပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် အန္တရာယ်ကင်းကင်း ဖြူ၀င်းလှပစေဖို့ Snail Wish Whitening Cream ကို အသုံးပြုကြပါစို့ 50g-29500 5g-3500 #SnailWishWhiteningCream 09454549089 m.me/NewSkiinMyamar
Stay Home ရင်း Garnier Super Essence လေးတဘူးရောင်းရပါတယ်😘😘😘
First Page « 173 174 175 » Last Page